Ny mpikambana ao amin'ny ekipa mpanohana ny tetik'asa sy ny teknika dia manana traikefa mihoatra ny dimy taona ny traikefa sy velaran'ny sidina mihoatra ny 1500 kilometatra toradroa. Mba hiantohana ny kalitaon'ny valiny dia nomaninay fakantsary hafahafa ny fakantsary tsirairay namboarin'i Rainpoo. Amin'izao fotoana izao, ny ekipan'ny tetikasanay dia manao serivisy toy ny sidina fakana sary miavaka, fanodinana angon-drakitra modely 3D, ary fanovana modely 3D.
Raha manana tetikasa toa ny Survey / GIS / Smart City / Construction / MiningTourism / fiarovana ny tranobe taloha / baiko vonjy maika ianao ary mila manao asa-maodely 3D, saingy tsy manana fitaovana na lehilahy za-draharaha, afaka manampy anao izahay hamita ireo asa ireo amin'ny vidiny mirary.
Manana cluster solosaina misy solosaina zato mahery izahay ary afaka manodina mihoatra ny 500000 indray mandeha.
Raha tsy tantinao ny angona sary be dia be toy izany, amin'ny fiantohana ny kalitao sy ny maha-marina ny maodely 3D, afaka manampy anao amin'ny fikirakirana angon-drakitra ireo izahay amin'ny vidiny mirary.
Ny orinasanay dia manana departemanta fanohanana teknika fakan-tsary, izay misy ireo injenieram-panohanana teknika faran'izay mahay. Ny salanisan'ny fanohanan'ny mpikambana dia mihoatra ny 3 taona. Aorian'ny fandefasana ny fakantsary, ny orinasanay dia hanendry injeniera mpanohana ara-teknika matihanina ho an'ny mpanjifa hampiofana ny fampiasana fakantsary hahazoana antoka fa afaka hampiasa tsara ny fakantsary ireo mpandraharaha.
Noho izany, raha manana olana amin'ny fampiasana fakan-tsary ianao dia afaka manome serivisy ny sampana fanohanana teknika. Ho fanampin'izay, ny mpanjifa tsirairay dia manana mpitantana serivisy ho an'ny tsirairay. Raha manana filàna serivisy teknika ianao dia afaka mifandray hatrany amin'ny mpitantana ny serivisy ho an'ny mpanjifa, faly izahay manampy anao.
Fanohanana mialoha ny varotra
Manaiky fanasana amin'ny fampisehoana izahay manerantany. Raha liana amin'ny fakantsarinay mihetsika izahay, aza misalasala mifandray aminay ary mahazo vintana demo.
Mino izahay fa ny vokatra tena tsara sy ny mpiasa za-draharaha dia afaka manome serivisy tonga lafatra ho an'ny mpanjifanay.
Ny traikefan'ny mpampiasa dia nifantohan'ny Rainpoo hatrizay. Mba hamaliana haingana ny filàn'ny mpampiasa, Rainpoo dia nanangana drafitra taorian'ny fivarotana, vonjy maika ary fanampiana sarobidy mba hiatrehana ireo olana tsy ampoizina isan-karazany sy hanomezana izay ilain'ny mpampiasa. Ekipa mpikojakoja fakan-tsary matihanina, ekipa mpanohana ara-teknika, ekipa fitsapana fakan-tsary, hiantohana ny kalitao avo lenta sy avo lenta isaky ny fakantsary novokarinay. Iraka mandrakizay an'ny Rainpoo ny manome ny mpampiasa vokatra sy serivisy tsara indrindra.